‘छाती र धड्कन छामेर काेराेना थाहा हुने होइन, पिसिआर नै हुनुपर्छ’ – Health Post Nepal
२०७७ असोज १ गते १२:१५
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। हिजो त झन उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमित संख्या भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले जनाएको छ।
अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरस के हो? यसले कस्तो असर गर्दछ भन्ने नै थाहा छैन। सरकारलाई प्राकृतिक प्रकोप भनेको दुई किसिमको हुन्छ भनेर नै थाहा छैन जस्तो लाग्यो। प्राकृतिक प्रकोप दुई किसिमको हुन्छ। एउटा नेचुरल डिजास्टर (प्राकृतिक विपत्ति) र अर्को भनेको महामारी रोग नै हो।
प्राकृतिक विपत्तिमा बाढीपहिरो आउनु, भूकम्प जानु र सुनामी आउनु पर्दछन्। त्यस्तै रोगमा हैजा, डेंगु, झाडापखाला, स्वाइन फ्लु, इबोला, कोराना भाइरसचाहिँ महामारीका रुपमा देखा परेका छन्।
अहिले सरकारी विज्ञ भन्नेहरुले नै कोरोना कुन वर्गमा पर्दछ भनी छुट्याउन नसकेका कारण अहिले विकराल अवस्थासम्म आइपुगेको हो।
विज्ञहरुले कोरोनालाई पनि भूकम्पमा जस्तै बिरामी भएको खण्डमा जुन अस्पतालमा सेवा उपलब्ध छ, त्यहाँ लगेर उपचार गर्ने सोचिए जस्तो लाग्यो। तर यो एकदम गलत हो। भूकम्पमा शारीरिक क्षतिमात्र हुन्छ त्यो सरुवा रोग होइन। त्यसैले जुन अस्पतालमा बिरामीलाई उपचार गरे पनि हुन्छ। तर यो कोरोना सर्ने रोग हो। जसका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म गरिएको छैन।
अहिले पनि सरकारले कोरोना भएका बिरामीलाई यताउता अस्पताल पुर्याउने काम गरिराखेको छ। जुन एकदमै गलत प्रयोग भइरहेको छ। यसको परिणाम सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेको हामीले देखेका छौं।
चीनको उहानमा कोरोना संक्रमित फेला पर्ने बित्तिकै त्यहाँ सरकारले लकडाउन गरेको थियो। कोरोनाका केही लक्षण देखिएका र शंका लागेका व्यक्तिमा पनि पिसिआर परीक्षण गराएको थियो। कोरोना संक्रमितमात्र राख्ने अस्थायी अस्पताल नै बनाएको थियो । त्यो पनि एक सातामै।
तर नेपालमा कोरोना देखिएपछि लकडाउन त सुरु गरियो। लकडाउनमा गर्नुपर्ने केही काम पनि गरेन सरकारले। लकडाउन गरेर यत्तिकै बस्यो।लकडाउनको समयमा केही स्कुलहरुलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरेको थियो। जुन पैसा खाने एउटा भाँडो भयो भ्रष्टाचारीका लागि। क्वारेन्टाइन बनाएको भनेर बाल्टिन, चप्पल, बेड, खाना, बेडसिटलाई करोडौं रुपैयाँ सिध्याइयो। जुन केही काम नै लागेन।
त्यसैले सरकारले आइसियू व्यवस्था गरेको खण्डमा संक्रमित जटिल खालका बिरामीलाई पनि बचाउन सकिन्छ। अर्को कोरोनाको उपचार भनेको प्लाज्माथेरापी हो। कोरोना संक्रमित भएर निको भइसकेका व्यक्तिको रगतले अर्को संक्रमितलाई निको पार्छ। अहिले धेरैले गरिराखेका छन्। सफल पनि भएको देखिन्छ।
अर्को आरडिटी मेसिनमा करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको थियो, यी विज्ञ भनाउँदाहरुले। हाम्रो नेपालमा छानिएका विज्ञहरु कोरोनाको रोकथामका लागि काम नगरिकन पैसा डाँट्ने काम गरिराखेका छन्। यी क्वारेन्टाइन र आरडिटी जस्तो नचाहिने कुरामा करोडौं पैसा बिनाफ्वाँक सकाएर अहिले चाहिने पिसिआर गराउन बजेट छैन भन्छन् सरकार।
यो कस्तो लाजमर्दो कुरा हो। नचाहिने काममा पैसा सकाउन लाज नमान्ने अनि चाहिने पिसिआर मेसिन किन्न बजेट छैन भनेर टार्ने? बरु त्यसको सट्टा कुनै एउटा अस्पताललाई कोरोना संक्रमितमात्र राख्ने अस्पतालको व्यवस्था गरेको भए कति फाइदा हुन्थ्यो। पैसा भएसम्म काम नलाग्ने कुराहरुमा खर्च गरे।
अहिले आएर सरकार पिसिआर परीक्षण पनि नगर्ने भन्छ। कोरोनाका लक्षण देखिएकाको मात्र परीक्षण गर्ने भनेको छ। जुन एकदम गतल निर्णय हो। अहिले सरकारले बजेट सकियो सबैको पिसिआर गर्न सकिँदैन भनेका छन्।
मेरो विचारमा सबैको पिसिआर परीक्षण गराउनुपर्छ। कोरोना लागेको थाहा कसरी पाउने? थाहा पाउने तरिका भनेको एउटै हो पिसिआर परीक्षण हो। अहिले नेपालमा एउटा विज्ञहरुले भनेको कुरा अर्कोलाई चित्त नबुझेको अवस्था छ। उनीहरुको विचार नै नमिलेपछि जनताहरुको हालत के होला? कुरा सुन्दा पनि हाँसौं कि रोऊँ जस्तो।
यस्तो महामारीको बेलामा त सबैजना एकजुट भएर कोरोना उपचारका लागि जुट्नुपर्ने हो? यसका लागि आफूहरुले के गर्न सकिन्छ सोच्ने समय हो? विदेशमा बनेका भ्याक्सिनहरु कतिको उपयुक्त छ रिसर्च गर्नुपर्ने हो खास। तर होइन अहिले सरकार त आज एउटा निर्णय सुनाउँछ। भोलि फेरि अर्को। सरकार नै अन्योलमा छ कि आफूले के गरिराखेका छन्। यस्तो त भएन नि? सरकार अभिभावक भएर जनतालाई सही सूचना दिनुपर्नेमा आफूले दिनदिनै निर्णय फेरेपछि जनता त त्यत्तिकै संकटमा पर्ने भइहाल्यो नि।
सुरुमा लकडाउन गर्ने बेलामा पनि सरकारले एकचोटि पनि सोचेन कि दिनदिनै कमाएर जुगाड गर्ने मजदुरको हालत के हुन्छ? उनीहरुलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ? केही पनि योजना नै नगरी यत्तिकै लकडाउन, निषेधाज्ञा गरेर केही हुनेवाला छैन सरकार।
सुरुमा त सोच्न सकेन भनौं। तर, पछि निषेधाज्ञा गर्नुअघि ती मजदुरका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन सरकारले? केही सिन्को भाँच्ने काम भएन। अहिले पनि सोसेल मिडिया, मिडियाहरुले तिनीहरुको दुःख समेटिएर समाचार दिइरहेका छन्। त्यो देखेर मेरो मनले पनि सहन सकेन। एकछाकका लागि उनीहरुको दुःख देखेर सरकार अहिले पनि केही गर्ने सोचेको नै छैन। सरकारले यस विषयमा केही विचार नै नगरेको अनुभूति हुन्छ। सरकारले समस्या समाधान गर्ने सोच र इच्छाशक्ति भएको भए गर्न सकिन्थ्यो।
कोरोनाबाट बच्न सकिने मुख्यतः तीन पक्ष छन्। एउटा प्लाज्माथेरापी, रेमडेसिभिर औषधी र आइसियूको व्यवस्था अनि पिसीआर परीक्षण नै हो।अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन रेमडेसिभिर भन्ने औषधी आएको छ। विभिन्न देशले उपयोग पनि गरिराखेका छन्, कोरोना संक्रमण कम गराउन।
जुन औषधी नेपालमा पाइँदैन। विदेशबाट नै मगाउनुपर्छ। अहिले कोरोना संक्रमितको इमिन्युटी पावर बढाउन यो औषधी ल्याउन खोज्नुपर्ने हो नि सरकारले? तर खोइ, केही पहल गरेको देखिँदैन। कोरोनामा कालोबजारी गर्नेहरु छन्।
धेरै पैसा हुने नेपालमा रहेका कोरोनाका संक्रमितले विदेशबाट कालोबजारी गरेर ल्याइएको रेमडेसिभिरबाट उपचार गरिरहेका छन्। तर त्यो त पैसा हुने गर्न सक्ने भयो । त्यसका लागि ४०–५० लाख खर्च हुन्छ। त्यो पनि बिरामी आइसियूबाट निको भएर घर जान पाउँछ कि पाउँदैन केही ठेगान हुन्न। त्यसैले न्यून आय भएका जनताको के अहिले बाँच्ने अधिकार छैन त सरकार?
एकदम क्रिटिकल अवस्थामा कोरोना लागेको विरामीलाई भेन्टिलेटर आइसियूमा राख्ने बेलामा एकदिनको १५ हजार खर्च हुन्छ। त्यो खर्च सबै जनताले बेहोर्न सक्छ त? फेरि त्यसमाथि ६ महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा कामबाट वन्चित भएका छन् जनता। यस्तै भइराख्यो भने सबै जनता एकछाक खान नपाउने अवस्थामा पुग्नसक्छ।
म एकजना चिकित्सक भएको नाताले बिरामीलाई चेकअप गर्ने बेलामा के थाहा मैले नै पो कोरोना सारिराखेको हुन्छु कि? त्यही भएर कोरोना अरु रोगजस्तो छाती छामेर, धड्कन छामेर थाहा हुने रोग होइन। यसको लागि पिसिआर चेक गराउनु नै पर्छ। अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन।
प्लाज्माथेरापीका लागि चाहिने रगत संकलन गरी आवश्यक बिरामीलाई दिनका लागि वातावरण मिलाउनुपर्ने हो। तर यसमा केही काम भएजस्तो लाग्दैन। एउटा ब्लड बैंकलाई कोरोनाबाट निको भएर रक्तदान गर्न चाहेका व्यक्तिको रगत संकलन गरेर राखेको भए चाहिने बित्तिकै उपयोग गरेर बिरामी बचाउन सकिन्छ। खोइ त यसमा सरकारले ध्यान गएको?
अहिले त कोरोनाबाट निको भएकाले पनि रक्तदान गर्न चाहेर पनि दिन सकिराखेका छैनन्। बिरामी हुन्छ काठमाडौंमा अनि रक्तदान दिने हुम्लामा भेटिन्छन्। रक्तदान दिने मान्छे काठमाडौं पुग्नै समय लाग्छ अनि यता काठमाडौंमा रहेका बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्।
बरु सरकारले त्यही प्रदेशमा नै प्लाज्माथेरापीका लागि रक्तदान गराएर ब्लड बैंकको समन्वयमा त्यो प्लाज्मा काठमाडौं पुर्याएर बिरामी बचाउन सकिन्छ नि? खोइ त यसतर्फ स्वास्थ्य विज्ञहरुको ध्यान गएको पाइँदैन। विज्ञहरु पनि कालोबजारी गरी खल्ती भर्नमा नै व्यस्त छन्।
सरकारको निर्णय असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधन, हवाईमार्ग सञ्चालन गर्ने निर्णय आयो। समस्या समाधान गर्ने कहाँ हो कहाँ अर्को समस्या थप्ने काम गरिएको छ। सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको यस्तो लापरबाही देखेर म त एकदमै चिन्तित छु। मेरो विचारमा त पिसिआर अनिवार्य गराउनुपर्छ। किनभने पिसिआर गराएन भने कुनै व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन् भने उसले परिवार, टोल, समाजमा सार्नसक्ने दर बढ्दो हुन्छ।
कोभिड भएका संक्रमितलाई सुरुदेखि आइसियूसम्मको उपचार दिन सक्ने छुट्टै अस्पताल र ननकोभिड बिरामीका लागि छुट्टै अस्पताल भएको खण्डमा यो महामारीलाई अहिले पनि रोक्न सकिन्छ।
साथै हाम्रा विज्ञ भनाउँदाले अहिले अमेरिका, रसिया, बेलायत, चीनले बनाएका भ्याक्सिनहरु कसरी बनेका छन् भनेर रिसर्च गर्नुपर्छ।
त्यसलाई हाम्रो नेपाल पनि बनाउन सकिन्छ कि? भनेर रिसर्च गर्नुपर्ने हो। अरु देशले भ्याक्सिन बनायो भनेर आफू चाहिँ चुप लागेर बस्नुभएन नि? अरु पनि उपाय छन् कि भनेर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै कोरोनाबाट बचेका व्यक्तिलाई प्लाज्माथेरापी गर्न रक्तदानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
(डा. दवाडीसँग हेल्थपोस्टकर्मी रेणु त्वानाबासुले गरेको कुराकानीमा आधारित)
डा. विश्वराज दवाडी